कहाँ कहाँ खुल्दैछन् पाचतारे होटल ? – Tourism News Portal of Nepal
कहाँ कहाँ खुल्दैछन् पाचतारे होटल ?
काठमाडौ, साउन । पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारको महत्वपूर्ण आधार होटल व्यवसायमा पछिल्लो समय लगानी बढेर गएको छ । पछिल्लो समय चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेशन जस्ता प्रतिष्ठित व्यापारिक समूह होटल व्यवसायतर्फ आकर्षित भएका छन् भने हिल्टन, मेरियट, सेराटनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल रहेका ठूला कम्पनीले पनि नेपालमा लगानी बढाएका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रमा अनुकूल वातावरण बनेको ठान्दै व्यवसायीले नेपालमा लगानी बढाए पनि पर्यटन आगमनको सुनिश्चितता र पर्यटकीय पूर्वाधार पर्याप्त नहँुदा लगानी डुब्ने पो हो कि भन्ने जोखिम पनि कायमै रहेको होटल व्यवसायीहरु बताउँछन् । होटल एशोसिएशन नेपाल हान का अनुसार होटल क्षेत्रमा तीन खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएको छ । करिब दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको यो क्षेत्रमा पछिल्लो समय ५७ अर्ब रुपैयाँ थपिएको हो ।
सन् २०२० सम्म तारे होटलमा अरु चार हजार शय्या थपिनेछन् । अहिले सञ्चालित होटलका कुल शय्या ३८ हजार हो । सरकारले सन् २०२० भित्र नेपाल आउने पर्यटकको संख्या २० लाख पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । तद्नुरुप पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणले भने गति लिन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । होटलमा लगानी बढ्नु सुखद पक्ष भए पनि पूर्वाधारको अभावमा लगानी जोखिममा पर्नसक्ने खतरा रहेको हानका अध्यक्ष अमरमान शाक्य बताउछन्।
‘ठूला होटलले बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरेका छन् । सरकारले होटल, विमानस्थल, सडकजस्ता पूर्वाधार थपेर सेवा नदिने हो भने पर्यटक आउन मुस्किल छ । पर्यटक भएनन् भने होटलका कोठा कसरी भर्ने रु अहिलेकै अवस्था रहे ऋणसमेत डुब्ने खतरा छ’ उनले भने। अहिलेको ‘अकुपेन्सी’ ७० प्रतिशत मात्रै हो, ठूला होटल थपिएपछि प्रतिस्पर्धा बढ्ने उनको आँकलन छ।
वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी योगेन्द्र शाक्य ठूला होटलमा लगानीका अवसर र चुनौती दुबै भए पनि अहिलेकै अवस्थामा पूर्वाधारमा जोड नदिइए लगानी जोखिममा पर्नसक्ने औँल्याउछन्। हानका अनुसार काठमाडौँलगायत पोखरा, चितवन, लुम्बिनी जस्ता प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र हिमाली क्षेत्रमा साना ठूला सयौँको संख्यामा नयाँ होटल र रिसोर्ट खुल्ने क्रम जारी छ । पर्यटन विभागका अनुसार ११ पाँचतारे, सात चारतारे र ११ तीनतारे गरी २९ वटा नयाँ होटल खुल्दैछन् । यस क्षेत्रमा लगानी बढ्नु समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागि उत्साहजनक भएको विभागको होटल शाखाका निर्देशक विष्णुप्रसाद रेग्मीले बताए।
राजधानीका प्रस्तावित पाँचतारे होटलमा सिटी होटल कालीमाटी, होटल क्राउन इम्पेरियल रविभवन, एभरेस्ट हस्पिटालिटी नक्साल, जगदम्बा हस्पिटालिटी नक्साल र अकला होटल धुम्बाराही र होटल ली शेर्पा छन् । त्यस्तै, राजधानीबाहिर रारा परियोजना, होटल टाइगर वान रूपन्देही, होटल पवन प्यालेस लुम्बिनी, भेगास सिटी इन्टरटेन्मेन्ट र होटल मेची क्राउन झापा छन् । पछिल्लो आकाँडा अनुसार पर्यटन विभागमा दर्ता भएका होटलको संख्या ५८५ छ । विभागमा पाँचतारे १०, चारतारे तीन, तीनतारे ३१, दुईतारे ४३, एकतारे ३३ र पर्यटकस्तरका ४६५ वटा होटल दर्ता छन् ।